Vaovao - Rafitra mifehy ny rivotra sy ny karazana compresseur
Rafitra fiaramanidina voafintina
Ny rafitry ny rivotra voahitsakitsaka dia misy lafiny famatsiana, izay misy compresseur sy fitsaboana rivotra, ary lafiny iray amin'ny fangatahana, izay misy ny rafitra fizarana sy fitehirizana ary ny fitaovana fampiasa farany. Ny lafiny famatsiana voafehy araka ny tokony ho izy dia hiteraka rivotra madio sy maina ary miorina amin'ny tsindry mety amin'ny fomba azo ianteherana sy mandany vola. Ity ambany ity dia mampiseho anao rafi-drivotra voafintina iray.
Betsaka ny karazana compresseur eny an-tsena, samy mampiasa teknolojia samihafa hamokarana rivotra. Ny famaritana ny compressors izay matetika ampiasaina amin'ny indostria dia manaraka.
1. compressors mamaly
Ny compressors reciprocating dia miasa amin'ny alàlan'ny asan'ny piston ao anaty varingarina. Ny tsindry dia azo mivoatra amin'ny lafiny iray na roa amin'ny piston. Ho an'ny rivotra mibontsina be dia be, mazàna izy ireo no lafo indrindra lafo vidy sy apetraka, ary mitaky fikojakojana lehibe kokoa, na izany aza, mety ho ambany noho ny vola kely amin'ny habe kely. Noho ny habeny sy ny hovitrovitra dia mitaky fanorenana lehibe izy ireo ary mety tsy mety amin'ny olana misy ny famoahana tabataba. Na izany aza, izy ireo no mahomby indrindra amin'ny angovo, sady feno no ampahany ampahany.
2. compresseur (na rotary) compresseur
Ny visy compresseur (na rotary) dia mampiasa visy helika roa, mivezivezy amin'ny lafiny mifanohitra mba hamoahana ny rivotra. Ireo compressors ireo dia matetika no vidiny ambany indrindra apetraka, ho an'ny rivotra mifatotra be dia be. Mba hiantohana ny fahombiazan'ny compresseur visy indrindra dia zava-dehibe ny haben'ny compresseur ary ampiharo ny rafitra fanaraha-maso anatiny sy ivelany ho an'ny fepetra enta-mavesatra. Ny fivoahana miovaova sy ny hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha matetika dia misy amin'ny ankamaroan'ny mpamatsy. Ity sary eto ambany ity dia mampiseho anao ny firafitry ny compresseur visy.